Any amin’ireo toerana fisavana eny amin’ny sisintany, savain’i Shina ny findain’ny Hongkongiana mba hitadiavana sary sy resaka mikasika fanoherana · Global Voices teny Malagasy
Fisavàna nanomboka rehefa nitombo ireo hetsipanoherana ilay tolodalàna fanolorana olomeloka
Voadika ny 30 Aogositra 2019 16:28 GMT
Sary: Ng Tin Hung/CHRF avy tamin'ny HKFP. Fampiasàna nahazoana alalàna.
Hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay 2019, mitatitra eraky ny tambajotra sosialy ireo mponina ao Hong Kong fa savaina ny findain'izy ireo rehefa mankany amin'ny tanibe Shina ry zareo. Mitady sary, lahatsary sy resaka anaty vondrona manohitra ny fanolorana olomeloka ireo polisin'ny sisintany. Raha toa ka mavitrika amin'ny fanoherana ilay vahiny, alaina am-bavany bebe kokoa izy ary ny sasany amin'izy ireo dia angatahana hanoratra taratasy fanomezana antoka fa tsy hiditra amin'ilay hetsika intsony any aoriana.
Niresaka tamin'ny vahiny 10 izay nosavain'ny polisin-tsisintany Sinoa tao amin'ny sisintany iraisan'i Shenzhen sy Hong Kong ny sary sy ny lahatsariny ny mpanao gazety iray avy tao amin'ny South China Morning Post (SCMP). Tamin'ireo 10 ireo, ny antsasany dia nozahàna avokoa ny hafatra manokany. Amin'ny tranga iray farafahakeliny, notakian'ny polisy ny olona iray izay hitany ho toy ny mpanao fihetsiketsehana mavitrika mba hanao fakàna ADN.
Ilay fisavàna finday tao amin'ny sisintanin'i Shenzhen dia nanomboka taorian'ny nihamafisan'ireo hetsi-panoherana ilay tetikasan-dalàna momba ny fanolorana olomeloka – izay mamela ny hitondràna ireo voampanga mipetraka ao Hong Kong ho entina tsaraina any amin'ny tanibe Shina – sy taorian'ny namaritan'ny governemanta sinoa ireo hetsi-panoherana ireo ho toy ny “Revolisiona Miloko” manohitra ny fitondrana kaominista. Nitranga tamin'ny 16 Jona ireo hetsi-panoherana lehibe indrindra, izay natrehin'ny olona roa tapitrisa.
Amin'ireo olona 700.000 izay mivezivezy isanandro eo anelanelan'ireo sisintanin'i Hong Kong sy i Shina, mponina ao Hong Kong avokoa ny antsasany amin'izy ireo — ary niteraka fikoropahana be tamin'ny maro tamin'izy ireo, izay manana orinasa na havana any amin'ny tanibe Shina ity fepetra vaovao fanarahamaso an-tsisintany ity.
Naniry ny hiresaka tsy am-pitononana anarana mikasika ny zavatra niainany tany amin'ilay sisintany ny ankamaroan'ireo olona nanontanian'ilay mpanao gazetin'ny SCMP, satria tsy afaka ny tsy handeha any amin'ny tanibe Shina izy ireo amin'ny hoavy. Ben Crox, 38 taona no niavaka tamin'izany. Tamin'ny 24 Jolay, fotoana fohy taorian'ny nandalovany ilay toby fisavana, namoaka tao amin'ny Facebook izy hoe:
Tao amin'ny faritry ny seranantsambon'ny Kwoloon Rapid Railway ao amin'ny tanobe Shina, nosakanana aho ary nasaina namoha ny findaiko. Nosavain'izy ireo ny sary sy lahatsariko ary tsy maintsy nanazava ireo loharanon'izy ireny aho. Nangatahan-dry zareo koa aho hampiseho izay rindrambaiko sy vondrona firesahana nahazoako ireo sary ireo. Tsy nalain'izy ireo ny bokiko satria tsy misy fantany ny soratra tao anatiny. Tsy nahatratra ny fiara an-dalambiako aho no sady tsy nahazo onitra. Teo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20% tamin'ireo mpandeha no nosakanana mba hosavaina.
Niaina zavatra toy izany koa ny namako iray ao amin'ny Facebook. Nampahafantarany ny namany tao anatina fanavaozana manokana fa nosavain'ireo manampahefan'ny polisin'ny sisintany Sinoa izy tamin'ny 26 Jolay tao amin'ny faritra seranan'i Futian. Tany, tsapany fa tanora avokoa ny ankamaroan'ireo mpivahiny voasakana. Tsy vitan'ny manamarina ny sary sy lahatsariny ihany fa mbola nangataka azy ny hanokatra ny WeChat ihany koa ny polisy mba hahafahana mijery ny resaka nataony tany anatinà vondrona fifampiresahana maro.
Nohadihadiana ireo voamarina fa mpanohitra
Ary ahoana ary raha tena nahita sary sy lahatsarina fanoherana tao amin'ny findain'ny olona ny polisin.tsisintany? Tao amin'ny pejy Facebook-ny, nanolotra tatitra amin'ny antsipirihany mikasika ny tranga toy izany ilay blaogera Chan Kam Shui, izay nitondrana ity Hongkongiana ity tao amin'ny efitrano fanibohana rehefa nahitan'ny polisin'ny sisintanin'i Lo Wu sarin'ilay hetsi-panoherana tao amin'ny findainy. Nanontaniana izy hoe inona tamin'ireo hetsi-panoherana no nandehanany ary inona no antony nanapahany hevitra ny hanohitra. Nentin'ny polisin'ny sisintany tao amin'ny biraon'ny polisin'i Lo Wu izy avy eo, izay nandraiketana ny anarany, ny laharan'ny findainy ary ny adiresiny any Hong Kong, ary koa ny anaran'ireo fianakaviany. Adiny efatra no naharetan'izany dingana rehetra izany.
Tao anatin'ny tranga iray hafa notaterin'ny Stand News, notazonin'ny polisin'i Shenzhen nandritra ny ora valo ny mpiasa iray avy amin'ny orinasana iray mpamokatra marika manana ny maha-izy azy taorian'ny nahitana sarin'ilay hetsi-panoherana ny fanolorana olomeloka tao anatin'ny findainy. Nalaina sary izy ary nangalàna ADN. Navotsotry ny polisin'i Shenzhen izy rehefa avy nanoratra taratasy nanome antoka fa tsy handray anjara amin'ny fihetsiketsehana intsony amin'ny hoavy.
Valy bontana feno faharanitan-tsaina
Raha toa ka nihamaro ireo tatitra manokana mivezivezy ao amin'ny tambajotra momba ireny tranga niainan'ny olona maro teny amin'ireny toerana fisavana an-tsisintany ireny, nitodika tany amin'ny tambajotra sosialy mba hizara tetika amin'ny fomba fitantanana izany toe-javatra izany ireo mpampiasa aterineto. Anisan'izany ny fiovàna mankamin'ny finday madio mihitsy rehefa handeha ho any amin'ny tanibe Shina ianao, ny fanamboarana tenimiafina ho an'ny vahiny ao amin'ny finday, ny famafàna ireo rindrambaiko fifaneraserana rehetra izay mifandraika amin'ireo hetsi-panoherana toy ny Telegram sy ny LIHKG na ny fitahirizana ny rakitr'izy ireo ao anatina lohamilina cloud azo antoka, ary ny fanadiovana mandeha tsy vohizina ny finday mialohan'ny hiampitàna ny sisintany.
Nandritra izay andro vitsivitsy izay, nisy resaka nandeha an-tambajotra mikasika ireo mpanao fihetsiketsehana avy ao Hong Kong izay toa tsy hita tao amin'ny tanibe Shina. Nanamarina tao amin'ny Facebook ilay mpanao lalàna Lam Cheuk Ting fa nanaraka akaiky roa tamin'ireo tranga ireo izy tamin'ny 17 Aogositra. Tena niteraka fikoropahana be teo anivon'ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpanohana ireo hetsi-panoherana izany ka mampiasa ireny tetika vaovao ireny izy ireo mba hanampiana amin'ny fampitoniana ny tahony.
Mba hamakiana bebe kokoa mikasika ireo hetsika manohitra ny fanolorana olomeloka any Hong Kong, tsidiho ny pejy manokana fandrakofan‘ny Global Voices.